Ekugcineni masibhekane neqiniso futhi sivume ukuthi ukufihla amaphutha okwangaphandle ngezimonyo, ikakhulukazi uma ungaphezu kuka-30, into engathembekile. Sekuyisikhathi sokuzikhandla. Ake sizinike lolu suku lonke! Kungcono ukushiya ngoMgqibelo nangeSonto ukuphumula.
Siqala kuphi? Kubukeka esibukweni. Izinwele zibuthakathaka futhi azizinene kakhulu? Ingabe isikhumba ebusweni nasentanyeni siyancipha? Ungakhathazeki, kulobu busuku uzozizwa uvuselelwe ngokuphelele. Ngakho, siqala! Uma usanda kuphawula ukuthi emva kokuxubha ebhulashi kukhona izinwele, khona-ke ikhanda lakho lokuzwa lidinga "ukudla". Akuyona embi, yebo, ukusebenzisa imikhiqizo ekhethekile yokunakekela, isibonelo, ama-balsam-rinsers. Kodwa ngomphumela ophelele ngokwengeziwe kuyadingeka ukuthatha amavithamini.
Iqiniso liwukuthi zonke izinwele zinezimpande. Uma ukudla okwanele, impande iyancipha, izinwele ziyawa. Kudliwa ukudla okudingekile amalungiselelo aqukethe amavithamini C, B 1 , B 2 , B 6 , PP, pantothenic acid, biotin, folic acid, methionine. Thatha ama-capsules amabili ngosuku izinyanga ezimbili, uphinde ufunde kabili ngonyaka. Ungakwazi futhi ukulungisa amaski akhethekile kusuka ekulahlekeni kwezinwele.
Kodwa-ke, qaphela: ungawudluli, lezi maski zifanelekile kakhulu izinwele ezimnyama nezinombala, ama-blondes angasiza ngosizo lwabo hhayi kuphela ukuqinisa izinwele, kodwa futhi azilungise ngokungazenzisi ngombala ongapheli.
Indawo eyinkinga kunazo zonke yabesifazane yintamo. Emva kokuphumula okuncane emva kokuzivocavoca ngezinwele, ake sizinakekele.
Ukunakekela intamo kuhlanganisa: ukugcina okuhle, ngisho nokuhlehlisa; icindezela; ukusikhipha. Kulula, udinga nje ukunikeza imizuzu embalwa nsuku zonke. Thenga ibhulashi ekhethekile yokumisa esitolo sezithokozi ukuze unakekele intamo. Ukuze uthole i-compress, ama-herbal, isibonelo, i-aloe, noma ingxube ngamaconsi e-rosemary, afanelekile. Okuhle entanyeni nasemasikeni amafutha, avame ukuphakanyiswa ngabahle be-beauticians ukuthola ukwelashwa okuvamile.
Nansi iresiphi esetshenziselwa ubuhle baseRoma lasendulo: 200 g weqabunga bayetshela amanzi angu-100 bese ulethe ngamathumba. Susa ekushiseni futhi uvumele ukufaka, ukucindezela. Lo lotion usula intamo yakho njalo ekuseni nakusihlwa. Ikhanda kahle isikhumba, yenza ithenda futhi ivimbele imibimbi.
Manje ungaqhubeka nenqubo enhle kunazo zonke - ukugeza kwezokwelapha . Ukugeza okuwusizo kakhulu ngolwandle usawoti noma amakhambi. Bathulise ngokuphelele isimiso sezinzwa, bakwenze ukhohlwe mayelana nokuhlupheka, ukukhuthaza, ukukhulula ukukhathala . Ngaphambi kokuba ugeze, kufanele nakanjani ugeze ngesipho ngaphansi kweshado, ngakho-ke wenza isikhumba sithinteke kakhulu emifuleni. Manje kungenzeka futhi ekugezeni. Phuma, uthathe indawo ekhululekile, zonke izingxenye zomzimba kufanele ziphumule. Isikhathi esihle sokugeza sikuyimaminithi angu-10 kuya kwangu-15. Emva kokugeza, isikhumba sidinga ukugcoba ngekhilimu noma ubisi lomzimba, kanye namafutha emvelo - umnqumo noma i-sunflower. Bashaya isikhumba ngobumnene, ngesimiso esiyindilinga. Lokhu kugeza isikhathi eside kuzoshiya umuzwa wokuvuselela nokuvuselelwa.
IBATHU ELIKHULU . Kunconywa isikhumba esomile esitholakala ekatatinization. Gcwalisa ukugeza ngamanzi okushisa komzimba bese uthele khona lapho umhluzi obukhulu kakhulu kusuka oat flakes, engeza izinkezo ezimbili ze-pine. Ngemuva kokugeza, yomisa isikhumba ngethawula bese uhlalisa ukhilimu.
UKUFANELEKA . Embhedeni olungiselelwe ngaphambi nje kokushisa komzimba, uthele ukumnika izinaliti (1 ingilazi ibe ngamalitha amabili amanzi abilayo agcizelele ku-thermos amahora angu-2.5-3). Ama-calms, aphindaphinda, akhulule ukungezwani kwesifo.
I-AROMATIC . Cishe ihora ngaphambi kokugeza, lungiselela i-decoction ye-dill, i-lavender, i-sage, i-rosemary, i-yarrow, i-chamomile (kufanele kube nezibuko ezimbili zamakhambi ahlangene). Umhluzi uthele emanzini. Isikhumba esivela kulokhu kugeza sizoba sesisha.
Amandla adinga ukunakwa njalo. Njengamanye amahloni, uma isipikili siphuka! Ukuqinisa izipikili kukhona ukugeza okuwusizo.
Isipuni 1 se-baking soda for 1 ingilazi yamanzi. Ukushisa kwamanzi kufanele kube ngu-37-38 ° C. Nciphisa iminwe yakho kwisisombululo esinjalo imizuzu engu-15.
Ukugcina izipikili zisesimweni esihle, udinga ukuqapha ukudla kwakho. Ekudleni kwakho kufanele kube khona ukudla okune-iodine, iron, calcium, i-vitamin B, i-zinc (izilwane zasolwandle nezitshalo). Kodwa kungcono ukunqaba itiye eliqinile.
Ngaphambi kokuba uqale umquba womzimba, yenza ibhuku lokuhlanza. Esitsheni, uthele amanzi amancane afudumele bese ufaka i-shampoo encane. Bamba izinyathelo kulokhu kugezela ngamaminithi angu-7-10, bese ususa ngokucophelela ama-burrs kusuka ekuguleni bese ubhala izinhlamvu zakho nge-ayisikili ye-nail.
Uma izinqubo zamanzi seziqediwe, kufanelekile ukucabangela ukuthi ungalondoloza kanjani ithoni ye-muscle futhi uthole imali edingekayo ye-vivacity. Ukwenza lokhu, sebenzisa isethi yokuzivocavoca okuqinisa imisipha engaphansi kwebele, futhi ngaleyo ndlela ukwandisa isifu ngokwayo. Ukuzivocavoca kudinga ukushisa.
UKUFAKA 1. Hlala esihlalweni, uncike emuva futhi uthathe isandla ngasinye kwisidumbu. Phakamisa izandla zakho phezulu. Ukujikijela emaceleni, kancane kancane wehlisa isisindo ezingeni lesifuba. Phinda lo msebenzi izikhathi eziningana.
UKUHLOLA 2. Nciphisa izingalo eziboshwe ukuze izingxube zifike ezingeni lesifuba; Ngaphandle kokugubha izinwele zakho, welula izandla zakho ezinhlangothini. Ama-dumbbells aphezulu, ama-elbows asesezingeni lesifuba.
Nazi izindlela ezimbalwa zokupheka kwanoma yiluphi uhlobo lwezinwele
Thatha isipuni esingu-1 se-henna, engeza isipuni esingu-1 samanzi abilayo ne-kefir, nquma i-clove ye-garlic, xuba ne-1 isipuni soju kanye ne-1/2 isipuni se-cocoa. Hlanganisa konke, engeza amaqanda, hlanganisa futhi. Faka isicelo sezinwele, ufake isikhwama sepulasitiki ekhanda lakho. Ngemva kokukhipha ihora nehafu, geza izinwele, uhlanza noma iyiphi i-decoction yemithi.
Hlanganisa isipuni 1 se-aloe juice ne-1 ithisipuni yejisi ka-garlic, engeza isipuni esingu-1 soju, i-yolk 1.
Hlanganisa konke bese usebenza esikhwameni. Gcoba izinwele nge-cellophane. Bamba imaski ekhanda lakho cishe isigamu sehora, emva kwalokho izinwele zihlanjululwe kahle.
Dlulisa i-anyanisi ne-aloe enyama-grinder ngobuningi obulinganayo. Faka le nhlanganisela izinwele amahora amabili, ehlanganiswe ne-cellophane. Bese ugeza izinwele nge-shampoo bese usomile.
Indlela yokuziphathisa ngendlela enhle salon?
Imfihlo emihlanu yobuhle u-Anastasia Zavorotnyuk: le mithetho kufanele iphawulwe
I-ombre noma ukuchithwa kwezinwele: izinwele, izindebe nezipikili
Amafutha abalulekile we-chaiber
Indlela yokulungisa imibala ekhanyayo: imithetho emithathu yombala ukwakheka-2017
Intombazane enesidingo enobunjwa obuhle
Kungani kufanele uphuze intombazane yocansi
Umzimba we-Anti-cellulite uhlambalaza
Imikhuba yokudla okunempilo: ukulahla okulimazayo
Amakhasimende asekhaya: Amathandlela Okuthandwa Umndeni Wami
Izidlo ezinhle kakhulu ezidumile
Ukuncintisana kwama-gymnastics ekuseni asezingane zesikole